Tiles Solar hisambotra angovo sy hizara izany any an-tranonay - Afrikhepri Fondation
Tiles amin'ny masoandro
Tiles Solar hisambotra angovo sy hizara izany indray ao an-tranonay
Theorinasa SolTech Energy dia namorona vahaolana tany am-boalohany hisamborana sy hitrandrahana ny hafanan'ny masoandro. Misy rahona na tsy misy. Misy fomba roa lehibe hampiasana ny herin'ny masoandro: ny voalohany dia ny photovoltaics, izay misy ny famadihana taratra mivantana ho lasa herinaratra. Ny faharoa dia mafana: mampiasa ny masoandro hanafanana ny rivotra manodidina, na hamokarana setroka ary noho izany herinaratra.
Ny taila novolavolain'i SolTech dia mangarahara. Mandritra ny fametahana ilay tranobe, dia mitety ny taratry ny masoandro izy ireo, ny hafan'io dia azon'ny fisaronana napetraka ao ambanin'ny taila. Rafitra misy patanty no mizara an'io angovo hafanana io manerana ny trano. Ary eo ny valiny: miaraka amin'ny taila soltech 150 m2, ny garderie ao an-tsisin'i Stockholm dia miteraka 48 kWh isan-taona - mihoatra ny in-droa ny fandaniana angovo trano tokana tokana.
Soltech dia misy amin'ny kinova efatra: Sigma, ho an'ny tafo vita amin'ny tile, Alfa, ho an'ny trano hafa, Techo Solar, ho an'ny tafo simenitra (indrindra any amin'ireo firenena Mediteraneana) ary Soltech Power, izay mampifangaro ireo tontonana photovoltaic hamokarana herinaratra. Ny rafitra novolavolain'ny orinasa tanora dia azo apetraka amin'ny trano rehetra, na misokatra io (ohatra: dobo filomanosana any ivelany) na mihidy.
Ny tanjak'ity fanavaozana ity? Voalohany indrindra, mamela ny hafanana ireo taila, noho ny masoandro, na dia mavesatra aza ny andro. Avy eo, tratra ny fitehirizana habakabaka be. Ny tafo manontolo (na rindrina, miankina amin'ny trano) dia azo ampiasaina hitahirizana hafanana avy amin'ny masoandro. Tsy centimetatra toradroa fanampiny no ilaina hametrahana Solartech.
Farany, ny rafitra naroson'ny orinasa dia manana tombony farany: ny maha-tsara tarehy. Ary raha misy olona fantatrao tsy mahita ireto tile ireto araka ny itiavany azy, azonao atao foana ny mampitahanao ny volanao amin'ny angovo.
Fitehirizam-boky nomerika (PDF)
Ireo takelaka 15 an'ny Thoth - Hermès Trismegistus (Audio)
Ny dikan'ny hoe mamela ny handeha - Eckhart Tolle (Audio)
Afrika afrikanina 2.0 - Hevitra folo ho an'ny orinasa iray manana endrika olombelona kokoa